Ny Fiainana Feno Herisetra Sy Ny Aorian’ny Fiainana Eny an-Tanàna Ambany Ao Venezoelana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2015 1:27 GMT
Any amin'ny tanàna ambany Venezoeliana, matetika heverina ho toy ny fisehoana vatan'ny fahombiazana na ny kolikoly ireo mpanao heloka bevava (na malandros, araka ny ahafantaran'ny maro azy ireo). Miaina any antsisin'ny fiarahamonina izy ireo ary miasa amin'ny fomba sarotrarotra, izay mamorona karazana maha izy azy. Amin'izany, toa karazana fombafomba tsy maintsy lalovana mandrafitra io maha izy azy io ny fandevenana azy ireo. Vokatry ny kolontsain'ny herisetra ao Venezoela ireo fombafomba atao ireo — vokatry ny heloka sy famonoan'olona izay lasa fiainana andavanandro any amin'ireo faritra maro ao amin'ny firenena.
Araka ny Fanarahana Maso ny Herisetra Venezoelana, tafakatra tamin'ny taha tena mampitahotra ny famonoana olona an-tsitrapo tato anatin'ny efa ho telopolo taona. Tena lehibe tokoa ilay fiakarany ka ankehitriny lasa singa lehibe amin'ny tantara maoderina Venezoelana ny vono olona. Miseho any amin'ireo faritra tena mahantra ao amin'ny firenena ny ankamaroan'ireny famonoana ireny, ireo tanàna mahantra indrindra, izay matanjaka tokoa matetika ireo “fombafomban'ny mpanao heloka”.
Niova ny fiteny Venezoelana hoe malandro tato anatin'ny folo taona faramparany. Manana fiseho vaovao hafa mihitsy ireo “mpamono heloka bevava vaovao” ankehitriny. Ohatra, mandeha any amin'ny tontolon'ny herisetra sy heloka izy ireo mialoha ny hidirany ao anatin'ny fahatanorana, ary hita ho toy ny “milina” izay hindrahindraina amin'ireo zavatra ratsy rehetra ataony.
Anatin'ny angano malaza, mizara karazany roa amin'ny ankapobeny ireo mpanao heloka ireo: ireo mahery fo ary ireo ratsy fanahy. Noho ny herin'ny basy, afangaro amin'ny haben'ny herisetra, maro amin'ireo jiolahy ireo no nahavita ho lasa sasany amin'ireo olo-malaza tena hajaina indrindra eo amin'ireo vondrom-piarahamoniny.
Ao amin'ity lahatsary YouTube eto ambany ity, zaraina ao amin'ny fandaharana Voces de la muerte (Feon'ny Fahafatesana), afaka hitanao ny fombafomba fanaovam-beloma miseho amin'ny fandevenana ireo mpanao heloka. Arahan'ireo mpitaingina môtô maro ilay faty, ao anatin'ny maripàna izay mamparenina ny alahelon'ireo olona akaiky azy miaraka amin'ny tifitra basy. Misy ireo olona sasany, na mbola mitsangana ao anatin'ny vahoaka aza, mampiseho ireo basiny ary manomboka fombafomba fanao manokana izay ahitàna ny tsirairay ao anatin'ny vondrona mifandimby mitifitra miverimberina imbetsaka.
Eny amin'ny làlana makany amin'ny fasana, mibahana ny fifamoivoizana ireo mpitondra môtô maro izay manao ilay filaharana handeha handevina, sady manao fampisehoana mampidi-doza, ary matetika, manendaka ireo mpandalo. Ao anatin'ny lahatsary hafa zaraina ao amin'ny fantsona YouTube an'i Samuel Jackson (tsy misy ifandraisany amin'ilay mpiantsehatra Amerikana), afaka mahita fifangaroana fitomaniana sy fankalazàna ianao. Mitondra fanomezana zava-pisotro misy alokaola mahery ireo olona manatrika ary mandrora avy any am-bavany eo amin'ny vatampatin'ilay maty. Mandeha farak'izay mafy ny mozika ary ny olona sasany mamorona dihy tampoka eo. Matetika, atao amin'ny tanànan'ilay maty ireo fivoriana ireo. Avy any, entina eny amin'ny fasana ilay vatampaty, fa tsy alohan'ny nitondran'ny fianakaviana sy ireo namana azy teo an-tsoroka.
Tsy vaovao na hoe fomba Venezoelana fotsiny io fomba fandefasana na fanaovam-beloma ny malandros ao amin'ny tanàna Venezoelana io. Noho ny media sosialy, anefa, fantatsika ankehitriny hoe basy firy tsy misy fanarahana maso mivaingana no miriorio eny amin'ny làlan'ny firenena. Ao amin'ny fantsona Youtube an'i Nelson R Izarza, afaka jerena ny fandevenana an'ilay nolazaina ho pran (ny lohan'ny vondrona iray mpanao heloka/andian-jiolahy)
Tsy hoe tsy mitonona anarana daholo ireo fandevenana sy fahafatesana. Mitondra ny anarana na ny fanampin'anaran'ny maty ny sasany amin'ny lohatenin'ireo lahatsary. Malaza sy fantatra ao amin'ireo saranga sosialy samihafa ireo lahatsary sasany. Toy izany ny fandevenana ilay voafonja teo aloha Luidig Ochoa, izay namorona ireo andianà tantara hita ao amin'ny Aterineto, malaza be, mitantara ny iainana ao amin'ireo fonjan'i Venezoela, ary ny fiainan'ireo voafonja teo aloha aorian'ny figadràna.
Ao amin'ny Youtube, matetika ny olona no mizara ireo fotoana avy tamin'ireo fandevenana ary manaraka tsara mihitsy ireo mpankafy. Mitovy amin'izany, ao amin'ny Twitter sy Instagram, mandefa hafatra fiaraha-miory sy fahatsiarovana ho an'ireo namany ny olona.